Android 6+ above Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ google assistance ထည့်သွင်းခြင်း
Posted by ကိုဆက် ကြီး on June 19, 2017
မိမိဖုန်းမှာ google assistant ထည့်သွင်းလိုတယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်များလိုအပ်ပါမယ်
1: google service များ အသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်။
2: android 6.0 နဲ့ အထက်ဖြစ်ရပါမယ်။ google အသုံးမပြုနိုင်သေးဘူးဆိုရင် ဒါလေးတွေ ဒေါင်းပီးထည့်ပါ။
For Android 6.xx https://my.pcloud.com/publink/show…
Google installer နဲ့လည်း သွင်းနိုင်ပါတယ်။ https://m.facebook.com/groups/185284258532652?view=permalink&id=274189659642111
ပီးသွားရင် google app ကို play store မှ ဒေါင်းပါ။ https://play.google.com/store/apps/details…
Google app ကို ဒေါင်းပီးသွားရင် google app ကို beta sign up လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။. မလုပ်ရင်လည်း ရတတ်ပေမယ့် လုပ်ထားတာပိုကောင်းပါတယ်။ sign up ဘယ်လို လုပ်ရလည်းဆိုတော့ Play store ရဲ့ google app ကို ဝင်လိုက်ပါ။ အောက်နားမှာ become beta tester ဆိုတာလေးတွေ့ပါမယ်။ beta tester ဖြစ်ပီးရင် google app ကို update လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်
#Note: :Google apps တွေလည်းသုံးလို့ရပီးသား ၊ google app လည်း beta version ဖြစ်ပီးသားလူတွေက အပေါ်က အဆင့်တွေကို ကျော်လို့ရပါတယ်။
ပီးသွားရင် setting > installed apps မှာ အောက်နား က defaults ဆိုတာလေးကို သွား လိုက်ပါ။ အောက်ဆုံးက assist and voice input မှာ google app ကိုရွေးပေးပါ။
ကဲ ဒါဆို သုံးလို့ရနေပါပီ။. ဘယ်လိာသုံးမှာလဲ ဆိုတာလေးကို setting ချရအောင် ။ ကျွန်တော်က home key ကို နှိပ်ပီး google assistant ကို ခေါ်ချင်ပါတယ် ။ ဒီတော့ setting > additional setting > buttons > Long press Navigation အောက်က home ကို launch google now ကို ရွေးလိုက်ပါတယ် ။
ကဲဒါဆို သင့်ဖုန်းမှာ google assistant သုံးလို့ရပါပီ။ သုံးလိုတဲ့အချိန် home key ကို ဖိထားလိုက်ပါ။ ( မိမိစိတ်ကြိုက်လည်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်)
အဆင်မပြေရင် google app နဲ့ google play service ကို clear data လုပ်ပါ။